Sababta & Sida Loo Heliyo SEO-gaaga Waxyaabaha Suuq-geynta iyo Warbaahinta Bulshada - Xeeladaha laga bilaabo Semptarka
Marka ay timaado wanaajinta SEO, ma qarsoodi in content waa boqor. Adigacontent content waa in ay noqdaan kuwo ku habboon, wargelin iyo xiiseynaya matoorada raadinta si ay u tixgeliyaan kor u dhigista darajada aad. Sanado badan,Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale soo rogay sawirka, iyo calaamadaha hadda ayaa loo isticmaalay in lagu caawiyo si sare loogu qaado liisanka raadinta raadinta.Waxaa cad in la arko in SEO-ga, suuq-geynta suuq-galka, iyo warbaahinta bulshada oo dhan ay wada shaqeynayaan si ay u hagaajiyaan xaaladdaada shirkaddaada.
Si aad u noqoto mid cad, waxaa jira 5 talooyin oo sarreeya, oo ay sharraxayaan Andrew Dyhan,Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,si loo caawiyo hagaajinta SEO-gaaga suuq-geynta iyo warbaahinta bulshada - como tener tu propio estilo.
1. Tufaaxyada Twitter-ka
Ma aha oo kaliya mawduuca ku jira boggagaaga oo ka caawinaya Google inay muujiso goobtaada.Inta badan ee aad tweet, iyo dadka intooda badan la wadaagaan tweets aad, ka sii wanaagsan tahay fursadaha aad u guurto darajo index. Dabeecadda weyn eeWebka adduunka oo dhan micnaheedu waa in geeddi-socodka ballaaran loo isticmaalo si loo ururiyo dhammaan xogta oo loo dhigo nidaam xaqiiqda ah.Google ee ku gurguurtey ayaa muhiim u ah caawinta canshuurtan, waxayna hadda tixgelin ka bixinayaan akoonnada Twitter. Sidaa darteedka dhig inta ugu badan ee aad Twitter iyo tweet iska!
2. Kobcinta mashaariicdaada warbaahinta bulshada si aad u heshid xiriiro wanaagsan
Maadaama mashiinnada raadiyeyaashu ay isku dayayaan inay keenaan macluumaad khuseeya dadkamarka ay u baahan yihiin, waxay ku tiirsan yihiin warbaahinta bulshada si ay u caawiyaan. Wareegyada intaa ka badan bogga ayaa leh, inta badan waxay muujinaysaa in dadku ay helaan goobtaasku haboon. Nasiib darro, dad badan ayaa hore u waxyeeleeyay tan hore waxayna ku hawlan yihiin farsamooyin madow-kumbuyuutar ah si loo kordhiyo darajooyinkooda goobta.Tani waxay horseedday in ay raadin ka raadiso warbaahinta bulshada si loo caawiyo..Maanta makiinadaha raadinta waxay eegaan calaamadaha bulshada sida Facebook, Tweets,Google + 1s si aad u aragto sida wanaagsan ee boggagaaga u shaqeynayo, iyo sida loola macaamilo si waafaqsan.
3. Isticmaal warbaahinta bulshada si aad u kordhiso kalsoonidaada
Maanta makiinadaha raadinta ma aha oo kaliya fiirinta waxyaabaha ku jira boggaga ama blogka.Waxay sidoo kale eegayaan mashaariicda warbaahinta bulshada. Sidee bay dadku ula macaamilaan waxyaabahaaga, iyo sidoo kale inta qof ee isku xirakuugu soo celin. Intee in le'eg dhagaystayaasha iyo saameynta aad leedahay ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa tixgelinta, sidaas darteed waqti ayay ku qaadataa inaad horumariso xitaaadoo sii kordhinaya dhagaystayaashaada.
4. Ku dir bogga Google+ maalin walba
Sameeyso muuqaalkaaga Google+, boostada maalin kasta iyo Google ayaa ku farxi doona.Ku biir jaaliyadaha iyo ku dhaji mowduucyada ku haboon, la wadaag faahfaahintaada, kaliya ha noqotee firfircoonaantaada profile Google+ Xaqiiji waxyaalaha aad tahaywadaagistaada Google+ waa content aad rabto in lagugu dhejiyo.
5. Xoojinta iyo ku habboon ciyaarta ciyaarta SEO
Markaad ka hadlaysid SEO iyo content, waxyaabo ay ka mid yihiin ereyada muhiimka ah, sharaxaadda meta, hooseqorista sawirrada, iyo tirooyinka ereyada ku jira bloggaaga ayaa xambaarsan dhammaan arimaha. Si kastaba ha noqotee, waxoogaa ayaa isbedelay waqti. Mashiinnada raadinta waahadda waxay ka walwalsan yihiin sida ugu macquulsan ee aad uhesho. Ma aha oo kaliya ku saabsan walxaha muhiimka ah, laakiin ku saabsan sida aad si waxtar leh uga jawaabi kartosu'aalaha dadku way waydiinayaan. SEO wuxuu kicin karaa nooca waxyaalaha ku jira natiijadaada. Sidaa darteed hubi in adigaMaadada waa sida ugu habboon oo ugu dadaal badan.
SEO, suuq-geynta, iyo warbaahinta bulshada ma aha mid aan xiriir la lahayn. Haddii ay wax yihiin, iyaguwaxay noqonayaan kuwo badan oo iskudubarid ah sanadaha soo socda. Waxay dhammaantood ka caawiyaan hagaajinta SEO iyo darajooyinka goobta waana in la tixgeliyaawada jir ah oo ku saabsan istaraatijiyadaha suuqgeynta bogga